Kuthiwani uma sishiya indlu yasemakhaya? | Izindaba Zokuhamba
UCarmen Guillen | | Spain amadolobha, Izindlela zokuphunyuka, Impelasonto
Phakathi nezikhathi zasekwindla nasebusika, enye yezindlela ezingcono kakhulu esingacabanga ngayo uma sifuna ukushiya ikhaya izinsuku ezimbalwa futhi sizichithe ngaphandle nomndeni, abangane kanye / noma umlingani, ukuhamba. indlu yasemakhaya. Cabanga isikhashana: usofa, ingubo, indawo yokubasa umlilo enomlilo nangaphandle kwendlu, kubanda kakhulu, kunemvelo eminingi ezungezile nokuhamba izintaba ngakusasa ekuseni. Kanjani? Ingabe uhlelo oluthandekayo noma akunjalo?
Yebo, namhlanje size ukukuncoma amadolobha amahle ukushiya indlu yasemakhaya futhi sijabulele imvelo nezinsuku ezimbalwa zokuphumula. Ukuba semvelweni wemvelo ngempelasonto noma ezinsukwini ezimbalwa zebhuloho, kusiza ukucabanga, ukunqamula kuyo yonke into bese ubuyela esimisweni ngamandla amakhulu nesikhuthazo.
1 Amadolobha okushiya indlu yasemakhaya
1.1 I-Aracena (Huelva)
1.2 Isi-Baeza (Jaén)
1.3 I-Cangas de Onís (Asturias)
1.4 I-Jerte (Cáceres)
1.5 I-Finestrat (Alicante)
Amadolobha okushiya indlu yasemakhaya
ISpain igcwele amadolobha amahle; inezindawo zombili ezisogwini nezasemakhaya lapho ungalahleka khona futhi ujabulele kokubili ulwandle nezintaba; Kepha kulokhu, sizoncoma amadolobha ama-5 asemakhaya lapho ungaya khona ngempelasonto ethile kulobu busika, inqobo nje uma amakhaza asibekezelela.
Uma sifuna ukuya kuleli dolobha elihle kufanele sizithobe engxenyeni eseningizimu-ntshonalanga yenhlonhlo, ikakhulukazi eHuelva. Uma, ngaphezu kokuhlala kwenye yezindlu eziningi zasemakhaya esingazithola kuleli dolobha, sifuna ukuvakashela izindawo zabavakashi futhi sijabulele ukubukwa okuhle, yidolobha elifanele ukwenza njalo.
E-Aracena ungazijwayeza ukuhamba ngezinyawo, yenza imizila yamabhayisikili, ubheke izilwane nezitshalo zalesi sifunda, vakashela i- umhume wezimanga nomlando wayo inqaba. Yebo,… Idolobha elinenqaba yalo yokuba nayo.
Uma lokhu kungakukholisi okwamanje, siyakwazisa futhi ukuthi yindawo lapho ungadla khona kahle kakhulu: iSerrano ham, inyama yeSierra, ushizi omuhle newayini, nezinye izitsha eziningi ezijwayelekile zale ndawo.
Kulomcimbi sikhethe idolobha elamenyezelwa Amagugu esintu ngu-unesco. Uma nge-Aracena besizothokozela inqaba yayo, izindawo zayo zemvelo nemigede yayo, eBaeza, sizojabulela inqwaba yamasonto, izigodlo nemibhoshongo.
KwaBaeza sizojabulela ne Isigodi saseGuadalquivir, nemibono yayo ngeSierra de Cazorla neSegura, ... Futhi-ke, sizojabulela kwelinye lamabha ayo e-tapas aneziphuzo ezimbalwa ezineminqumo ejwayelekile yaseSierra Jaén.
I-Cangas de Onís (Asturias)
Impela usibonile isithombe esingajwayelekile sebhuloho laseRoma elinesiphambano esilengayo ... Yebo, leli bhuloho lithwetshulwe kangaka yibo bonke abeza kule ndawo, liseCangas de Onís. Imayelana ne- Ibhuloho LaseRoma ngesijeziso salo seVictory Cross.
Uma uhamba ngayo uzofinyelela kufayela le- ICovadonga National Park, lapho ungavakashela khona i-hermitage futhi ujabulele i-gastronomy enhle yomhlaba.
ICangas de Onís izoba idolobha lapho uzofuna ukuya khona kaninginingi uma usulazi kahle… Idolobha ozovele ulithande ekuqaleni.
Leli dolobha laseValle del Jerte lisendaweni ephakeme yomfula lapho lithatha khona igama lalo cishe ngamamitha angama-600 ukusuka phezulu. Intelezi yayo ethile isendaweni yayo ekhangayo: izungezwe izingadi zezithelo, izimfunda ezibiyelwe namathala agcwele izihlahla zezithelo ezihlelwe emithambekeni. Kuyidolobha elincane elingenalutho Izakhamizi ezingama-1336.
Ngeke ukwazi ukuphuthelwa leli dolobha ISonto Lethu Lady of the Assumption, lo IHermitage yeCristo del Amparo Kusukela ngekhulu le-XNUMX, iCalleja Los Bueyes, iSalmonidae Breeding Center kanye neFlorora and Fauna Interpretation Center yeGarganta de los Infierno Natural Reserve.
Idolobha ongalithola futhi ulibone ngempelasonto.
Idolobha lasemaphandleni elihlukile kunamanye, ngoba ngaphezu kokukwazi ukujabulela ubungqayizivele balo basemaphandleni, uzophinde ube nama-coves namabhishi aseduze kakhulu. Ingenye yezindawo ezinhle kakhulu ku- ICosta blanca.
Lapha ungajabulela isigodlo sayo esidala kanye ne- UPuig Campana nezitaladi zayo nemithambeka emikhulu kanjalo nezindlu zayo ezinemibala ehlukahlukene.
Indawo enhle kakhulu yokuzungeza izinsuku ezimbalwa ...
Yimaphi kulawa madolobha okuhehe kakhulu? Ngabe ikhona osuvele wayivakashela futhi ufuna ukugqamisa okuthile ngayo?
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Izindlela zokuphunyuka » Kuthiwani uma sishiya indlu yasemakhaya?
Izindawo zokungcebeleka ezi-3 zemvelo nezokunethezeka